Color Flex - Home
Yangon. YGN Colour Flex Advertising Co.,Ltd
Road Sign and Shop Sign (Stand)
Counters and Display Shelves
Vinyl, Sticker Printing and installation
Bus Shelter, Booth
Other Advertising Services Page
ကျွန်တော်တို့ Colour Flex Advertising မှ Billboard အရွယ်အစား မျိုးစုံကို ခိုင်ခန့်စွာ ပြုလုပ်တပ်ဆင် ပေးပါသည်။ လူကြီးမင်းတို့ ပြုလုပ် ကြော်ငြာလိုသည့် Billboard size မျုိုးစုံကို သံကိုယ်ထည် (Iron/GI Structure)တည်ဆောက် ပေးခြင်း၊ Design ရေးဆွဲပေးခြင်း၊ Billboard Vinyl အသစ်လဲပေးခြင်း၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်း ပေးခြင်း၊ အကြံပြုပေးခြင်း Billboard တည်နေရာ ရွေ့ပြောင်းပေးခြင်း တို့ကိုဆောင်ရွက် ပေးလျက်ရှိပါသည်။ ကျွန်တော်.....
BCO Sunshade Services:
ကျွန်တော်တို့ Colour Flex Advertising မှ BCO Sunshade ပုံစံမျိုးစုံကို ခိုင်ခန့်လှပစွာ ပြုလုပ်တပ်ဆင် ပေးပါသည်။ လူကြီးမင်းတို့ ပြုလုပ်လိုသည့် Sunshade design ပုံစံ များကို ပြုလုပ်ပေးခြင်း၊ Design ရေးဆွဲပေးခြင်း ၊ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းပေးခြင်း၊ အကြံပြုပေးခြင်း တို့ကို ဆောင်ရွက်ပေးလျှက် ရှိပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ Colour Flex Advertising မှပြုလုပ် တပ်ဆင်ပြီးစီးခဲ့သည့် BCO Sunshade ဓာတ်ပုံအချို့ကို အောက်တွင် ကြ�.....
ကျွန်တော်တို့ Colour Flex Advertising မှ Signage ပုံစံမျိုးစုံကိုခိုင်ခန့်လှပစွာပြုလုပ်တပ်ဆင်ပေးပါသည်။ လူကြီးမင်းတို့ ပြုလုပ်လိုသည့် Signage design ပုံစံ များကိုပြုလုပ်ပေးခြင်း၊ Design ရေးဆွဲပေးခြင်း ၊ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းပေးခြင်း၊ အကြံပြုပေးခြင်းတို့ကိုဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ Colour Flex Advertising မှပြုလုပ်တပ်ဆင်ပြီးစီး ခဲ့သည့် Signage ဓာတ်ပုံအချို့ကို အောက်တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါ.....
Office Address : No.18, Bo Sein Mhan Street, Kyeikkasan Ward, Bahan Township, Yangon, Myanmar.
09 5120710, 095415515, 09 43198939, 09 43195090
Email : colorflexadv10@gmail.com
© 2016 Colour Flex. All Rights Reserved. Design by Newworth Co.,Ltd.